Khilaafkii doorashada: Maxay tahay in aad ka ogaato xaalka Soomaaliya ee saaka? | Hangool News
Khilaafkii doorashada: Maxay tahay in aad ka ogaato xaalka Soomaaliya ee saaka?
Kaddib maalmo xaaladda magaalada Muqdisho kacsanayd, saaka waxa ay u muuqataa in xaalku deggan yahay, inkasta oo mar kasta xaaladda ka sii dari karto oo cabsi guud ay hayso shacabka.
Hase ahaatee waxaa jira dhacdooyin iyo arrimo kala duwan oo hadba isa soo taraya, kuwaas oo aan kusoo koobayno xagga hoose.
Maxaa u danbeeyey?
Ciidamo ka tirsan kuwo ka soo horjeeda kuwa dawladda ayaa la sheegay in ay ka guureen fadhiisammadoodii hore oo ay u aag beddesheen meelo kale.
Halka dhinaca kale ciidamada ammaanka ee Dowladda ay bilaabeen inay furaan wadada u dhaxeysa Isgoysyada KM4 iyo Tarabuunka (Waddada 21-ka Oktoobar), halkaas oo horay ay dhufeysyo uga sameysteen ciidamo ka tirsanaa kuwa taageersan mucaaradka oo ilaalo u ahaa Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Saadaq Joon iyo Yuusuf Indhacadde.
Waxaa sida oo kale la arkayey xaafadihii iska hor imaadyadu ka dhaceen dadka ku sugan oo isku deyaya in ay qaxaan, iyaga oo dadku aadaya xaafadaha kale ee nabdoon ee magaalada. Gaar ahaan xaafadaha la soo weriyey in laga barakacayo waxaa ka mid ah: Xaafado ka tirsan degmooyinka Hodan iyo Hawl-wadaag. Waxaana la arkaayey gawaadhi ay saaran yihiin dad barakacaya, isla markaana ay ku raran yihiin agabkii guryaha sida maacuunta oo maraya waddooyinka magaalada
Maalinkii shalay ahayd waxaa xidhnaa inta badan goobaha waxbarashada, gaar ahaan jaamacadaha, lamana oga in saakay dib loo furey iyo in kale. Balse arrinkan waxa ay ka turjumeysaa xaaladda ammaan ee magaalada oo dad badan ay walaac xooggan ka muujinayaan iyo in aanan la isku halayn karin.
Yey yihiin “siyaasiyiinta xanaaqsan” ee uu Farmaajo sheegay?
‘Bootada musharraxiinta mucaaradka car afka hasoo dhaafto’
Dhanka kale maamulka idaacadda Mustaqbal ayaa BBC-da u sheegay in burburin loo geystay agabkii shaqada ee yaallay xafiiska idaacadda, iyada oo badhna laga qaatay. Waxaana ay falkaas ku eedeeyeen ciidammada dawladda. Weli wax war oo arrinkaa ku saabsani kama uu soo bixin dhinaca dawladda. Idaacada Mustaqbal xarunteeda waxa ay ku taalaa meel u dhow Kiilo Mitir Afar (4).
Xalay maxaa dhacay?
Habeenkii xalay ahaa qaybo ka mid ah magaalada waxaa ka dhacay muddaharaaddo looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo. Dadkii muddaharaaddada ka falceliyey waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif Sh Axmed oo bartiisa Facebook ku soo qoray hadal u dhignaa sidan:
“Waxaan soo dhaweynayaa banaanbaxyada nabadeed ee lagu diidan yahay muddo kororsiga sharci darrada ah ee qaybaha bulshada Gobolka Banaadir ay ka dhigayaan magaalada Muqdisho. Waa tallaabo lagu difaacayo xorriyadda iyo dimuqraadiyadda, waxaana aaminsanahay in dibadbaxyadu yihiin habka ugu wanaagsan ee ay shacabka ku muujin karaan dareenkooda.”
Mudaaharaadka ayaa kasoo biloowdey degmada Kaaraan, waxayna dadka ku socdeen waddada Wadnaha, iyaga oo soo gaaray illaa Isgoyska Xararyaale (Ex Florensa).
Maraykanka : Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka oo sheegtay inay si aad ah uga walaacsan tahay isku dhacyadii rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada Muqdisho, iyagoo ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay is xakameeyaan oo ay si nabad ah ku xalliyaan khilaafka u dhexeeya sida laga soo xigtay warsaxaafadeed ka soo baxay xalay.
Waxaana mar kale ay ku celiyeen in dhinacyada ku lugta lehi ay la kulmi doonaan xayiraado.
Qoraalka sawirka,Somalia is in political and economic turmoil
Halkee ku kala sugan yihiin mucaaradku?
Ciidamada gaarka ah ee booliska Haramcad ayaa iyana saaka tagay aagagii ay ka baxeen ciidamada mucaaradka ee fadhiyay agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim Salaad Xasan , iyagoo halkaa ka qaaday jidgooyooyinkii ay dhigeen labadii maalmood ee la soo dhaafay ciidamada ka soo horjeeda dawladda. Jid jooyada waxaa ka mid ahaa carro-tuur lagu gooyay waddada.
Xaafadda Siigaale ee degmada Hodan waxaa la sheegayaa in ay fadhiisin ka samaysteen ciidammada ka soo horjeeda dawladda.
Dhinaca kale Xaafadda Mirinaayo ee degmada Cabdicasiis ayaa iyana waxaa ku sugan qaar ka mid ciidammada ka soo horjeeda muddo korodhsiga Haayada dawladda.
Maalmihii u danbeeyey Xiisad colaadeed ayaa ka taaganayd Muqdisho kaddib markii khilaafkii siyaasadeed ee ka jiray arrimaha doorashada uu isu baddalay gacan ka hadal.
Iyadoo isbuucyadii lasoo dhaafayba ay jirtay cabsi ayaa axaddii waxaa magaalada caasimadda ah ka dhacay dagaallo u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo xoogag kasoo hor jeeda oo taabacsan xubnaha mucaaradka.
Galinkii dambe ee isla maalintaas ayay dagaalladu ka billowdeen xaafado ka tirsan Waqooyiga Muqdisho, xilligii afurkana waxay dagaallo kale ka qarxeen dhinaca koonfureed, gaar ahaan degmada Hodan.
Inkasta oo ay dhinacyadu u muuqdaan in ay weli meelo kala duwan isku hor fadhiyaan waxaana isasoo taraya baaqyada lagu dalbanayo in xiisadda la dajiyo iyadoo ay ugu horreeyaan kuwa kasoo yeeraya ururrada bulshada rayidka. Isla dhanka kale maalintii shalay ahayd uu Raysalwasaare Rooble ku baaqay xabbad joojin iyo in ay wadahadlaan mucaaradka iyo dawladdu.